राष्ट्रवाद भन्ने कुरा नक्कली रहेछ : जनता समाजवादी पार्टी नेता लक्ष्मणलाल कर्ण – nepaliSamachar.com नेपालीसमाचार
Homeअन्तरवार्ताराष्ट्रवाद भन्ने कुरा नक्कली रहेछ : जनता समाजवादी पार्टी नेता लक्ष्मणलाल कर्ण
२ मंसिर २०७७, मंगलवार १८:३३ नेपाली समाचार अन्तरवार्ता 0
जहाँसम्म तपाईंले ‘र’ सँग भेटको प्रसंग राख्नुभयो । संसारभर यस्तैगरी चल्छ । यसमा चिन्ता लिइरहनु पर्दैन । को आएर भेट्यो भन्दा पनि के के कुरामा छलफल भयो ? देशको हितमा के गरियो ? त्यो कुराचाहिँ सार्वजनिक हुनुपर्‍यो । एउटा ‘र’को प्रमुख आएर भेट्दैमा सकिजाने त्यति कमजोर हाम्रो सार्वभौमिकता होइन ।-जन आस्था